Mansur oo Noqday Madaxweynaha KMG Masar
Guddoomiyaha maxkamadda dastuurka Caadil Mansuur ayaa maanta loo dhaariyay xilka madaxweynaha KMG ee Masar kadib markii militariga dalkaasi ay shalay xukunka ka tuureen Maxamed Morsi oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimoqraadi ah lagu soo doorto dalka Masar.
Caadil Mansuur oo ah 68 jir ayaa hadal kooban oo uu ka jeediyay munaasabadda dhaarta wuxuu ammaanay dadka dibadbaxa dhigayay ee dalbaday inuu is-casilo Morsi, kuwaasi oo u sheegay in caalamka ay tuseen inay awood xoogan leeyihiin.
Militariga Masar ayaa shalay xukunka ka tuuray madaxweyne Morsi, sidoo kale hakiyay dastuurka dalkaasi oo muddo 6 bilood ah jira.
Madaxweynihii hore Maxamed Morsi ayaa la sheegayaa in haatan lagu hayo xero ciidanku leeyihiin.
Dibadbaxyada lagu dalbananay inuu xilka ka dago Morsi ayaa bilowday Axaddii, waxayna militaragu Isniintii u qabteen Morsi iyo mucaaradka wakhti kama danbeys ah oo 48 saacadood ah oo xal ay ku gaareen, balse dalalbkaasi militariga ayaa Morsi uu ka hor-yimid, taasoo ugu danbeytii dhalisay in shalay ay militarigu xukunka ka tuuraan.
Ururrada Islaamiyiinta ee taageerra Morsi ayaa diiday afganbiga Morsi, waxayna wacad ku mareen inaysan dhiigooda u horudoonaan difaacidda Morsi.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in Maraykanku uu aad uga welwelsan yahay go’aanka ciidanka Masaaridu uu xilka kaga qaaday Morsi, isla markaana uu dastuurkii dalka ku hakiyey.
Rabshado ka dhashay dibadbaxyada oo dhexmaray mucaaradka iyo taageerayaasha Morsi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 50 qof.